Nri Lemọn | Ọkọwa Okwu Ahụike
Iji Mmiri Lemọn Maka Nri Lemọn
Waterụ mmiri lemon bụ ụzọ ebumpụta ụwa, iji gbochie ma ọ bụ belata ọtụtụ ọrịa. Lemọn na limes bụ mkpụrụ osisi citrus a ma ama nke enwere ike iji ya rụọ ọtụtụ ụzọ. Enwere ike iji ha iche ma ọ bụ jikọta ya na ihe ndị ọzọ bara uru dị ka mmanụ a honeyụ, nnu nnu, wdg Ozugbo ahụrụ naanị n'ụlọ nri nri ahụike, nri nri bụzi ihe a na-ahụkarị ugbu a n'ọtụtụ ụlọ ahịa n'ihi na ọtụtụ mmadụ na-agụ akwụkwọ maka uru iri nri dị. “Organic” na nke ahụ bụ ihe ha na-achọ.
Gịnị bụ Nri Lemọn?
Eji m n’aka na ị nụla maka nri lemon ma ọ bụ lemon detox. Ọ bụ ezie na a nọwo na-eme mkpo mmiri lemon kemgbe ọtụtụ narị afọ, ugbu a ka amataziri maka uru ọ baara ahụike mmadụ. Ọ biala gburugburu ma ugbu a onye ọ bụla na-achọgharị na Internetntanetị ịchọpụta ihe niile gbasara nri a. Yabụ kedu nri lemon detox? Agbanyeghị, ha nwere ike ịdị iche na ha dabere na ụkpụrụ nke iji ihe ọ juiceụ lemonụ lemon nke ewepụtara site na lemons ka o mee ka ahụ ya dị ọcha site na nsị yana nsị.
Nri Lemọn - 19 Ahụike Ahụike Dị Mma nke Lemons
Amara Nri Lemọn Dị Ka Nri Lemọn.
Ebumnuche Maka Ime Nri Lemọn Na Ọnọdụ efu.
1. Lemọn bara ụba na vitamin C ma nyere aka mee ka usoro ahụ gị si alụso ọrịa ọgụ sie ike. Lemọn nwere ihe ndị na-egbochi nje na ọgwụ nje, na-enyere aka ịlụ ọgụ flu, oyi, ọrịa nke akụkụ okuku ume, akpịrị mgbu na mbufụt nke tonsils. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ na-a waterụ mmiri lemon kwa ụbọchị adịghị yikarịrị ka …….